MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward CDMA to GSM MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
စတင်အသုံးပြုခြင်းအသံဝန်ဆောင်မှုData ဝန်ဆောင်မှုထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများဟန်းဆက်များRoaming နှင့် နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုလိုတရနှင့် အခြား Application များTourist SIM
ဟန်းဆက် ပရိုမိုရှင်းများအသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများData ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများCDMA မှ GSM သို့
ကိုယ်တိုင်သုံး အထောက်အကူပြု နံပါတ်များSelf-Careအမေးအဖြေများဆက်သွယ်ရန်ဆိုင်တည်နေရာများ
Roaming နှင့် နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု
လိုတရနှင့် အခြား Application များ
Contact Us MM
Store Location MM
Mobile Enablement Package
CDMA နံပါတ်နှင့်အလားတူ GSM ဆင်းကဒ်ရယူအသုံးပြုခြင်း MPT မှ CDMA သုံးစွဲသူများအား အလားတူ 3G GSM နံပါတ်များအား အခမဲ့ပေးသွားမည့်အစီအစဉ်ကို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များရှိ ဆက်သွယ်ရေးရုံးများ၌ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များရှိ ဆက်သွယ်ရေ ရုံးများ၌ ထိုအစီအစဉ်အား ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ 3G GSM နံပါတ်ထုတ်ယူရာတွင် CDMA ဖုန်း နှင့်တကွ SIM မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပါ တပါတည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပါ ယူဆောင်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များရှိ ဆက်သွယ်ရေ ရုံးများ၏ လိပ်စာအသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပါစာရင်းထဲတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 106 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ MPT ရုံးလိပ်စာများ
1ကျိုက်ထို MPT Own Shopကျိုက်ထိုAuto Exchange,ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊တောင်သူစုရပ်။ကျိုက်ထိုမြို့။မွန်ပြည်နယ်
2ဘီးလင်းAuto Exchange စခန်းဘီးလင်း Auto Exchange,ကျွန်းတောလမ်း၊ကန်သာယာရပ်ကွက်။ဘီးလင်းမြို့။မွန်ပြည်နယ်
3သထုံ Auto Exchange စခန်းသထုံ Auto Exchange ,စာတိုက်လမ်းနှင့်နန်းတော်ဦးကျောင်းလမ်းထောင့်၊နန်းခဲရပ်ကွက်။သထုံမြို့။မွန်ပြည်နယ်
4မော်လမြိုင် MPT Own Shopပြယ်နယ်ဆက်သွယ်ရေးရုံးဝင်း၊အထက်လမ်းမကြီး၊စစ်ကဲကုန်းရပ်။မော်လမြိုင်။မွန်ပြည်နယ်
5မုဒုံ MPT Own Shopမုဒုံ Auto Exchange ဝင်း၊မော်လမြိုင်-သံဖြူဇရပ်လမ်း၊ကျုံဖိုက် ကျေးရွာ။မုဒုံမြို့။မွန်ပြည်နယ်
6သံဖြူဇရပ် MPT Own ShopExchange ဟောင်းဝင်း၊ရေး-သံဖြူဇရပ်လမ်း၊အောင်ကုသိုလ်ရပ်ကွက်၊သံဖြူဇရပ်မြို့။မွန်ပြည်နယ်
7ရေး Auto Exchangeရေး Auto Exchange ဝင်း၊ရန်ကုန်-မြိတ်လမ်း၊သီရိခေမာရပ်ကွက်။ရေးမြို့။မွန်ပြည်နယ်
8ချောင်းဆုံ Auto Exchangeချောင်းဆုံ Auto Exchange ဝင်း၊ အ.ထ.က အနီး၊ဆေးရုံးအရှေ့၊ချောင်းဆုံအနောက်ပိုင်းရပ်။ချောင်းဆုံမြို့။မွန်ပြည်နယ်
9လ/ထ-ထွေ/ဂျာရုံးဆေးရုံလမ်းနှင့်အထက(၁)လမ်းထောင့်၊ လမ်းငါးသွယ်အနီး၊ စိုးကောမင်းရပ်၊ မကွေးမြို့။မကွေးမြို့မကွေးတိုင်း
10အော်တိုအိတ်ချိန်းလမ်းမတော်၊ အမှတ်(၁၅)နယ်မြေ၊ရေတနာအိုင့်ရပ်၊ ချောက်မြို့။ချောက်မြို့မကွေးတိုင်း
11အော်တိုအိတ်ချိန်းရုံးကြီးလမ်း၊ တောင်ပြင်(၂)ရပ်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့။တောင်တွင်းကြီးမြို့မကွေးတိုင်း
12အော်တိုအိတ်ချိန်းရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်းဘေး၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဆတ်သွားမြို့။ဆတ်သွားမြို့မကွေးတိုင်း
13အော်တိုအိတ်ချိန်းမကွေး-နတ်မောက်လမ်း၊ အောင်ဆန်းရပ်၊ နတ်မောက်မြို့။နတ်မောက်မြို့မကွေးတိုင်း
14အော်တိုအိတ်ချိန်းစည်ပင်သာလမ်း၊ အိုးဘိုရပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့။ရေနံချောင်းမြို့မကွေးတိုင်း
15အော်တိုအိတ်ချိန်းမြို့ဦးလမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်၊ မြို့သစ်မြို့။မြို့သစ်မြို့မကွေးတိုင်း
16အော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်၊ မင်းဘူးမြို့။မင်းဘူးမြို့မကွေးတိုင်း
17အော်တိုအိတ်ချိန်းစကု-မင်းဘူးကားလမ်းဘေး၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ စကုမြို့။စကုမြို့မကွေးတိုင်း
19အော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ပွင့်ဖြူမြို့။ပွင့်ဖြူမြို့မကွေးတိုင်း
20အော်တိုအိတ်ချိန်းနရပတေ့စည်သူလမ်း၊ ပေါင်းနားရပ်၊ စလင်းမြို့ ။စလင်းမြို့မကွေးတိုင်း
22အော်တိုအိတ်ချိန်းဘုရင်နောင်လမ်း၊ ကျောင်းတွင်းရပ်ကွက်၊ ငဖဲမြို့။ငဖဲမြို့မကွေးတိုင်း
23အော်တိုအိတ်ချိန်း(၁၁)လမ်း၊ တရော်ကုန်းရပ်၊ အောင်လံမြို့။အောင်လံမြို့မကွေးတိုင်း
24အော်တိုအိတ်ချိန်းပြည်ခိုင်ဖြိုးလမ်း၊ ပြည်တော်အေးရပ်ကွက်၊ သရက်မြို့။သရက်မြို့မကွေးတိုင်း
25အော်တိုအိတ်ချိန်းဦးကြင်ဥလမ်း၊ အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့။ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့မကွေးတိုင်း
26အော်တိုအိတ်ချိန်းဥယာဉ်တန်းလမ်း၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ ကံမ(သရက်)မြို့။ကံမ(သရက်)မြို့မကွေးတိုင်း
27အော်တိုအိတ်ချိန်း‌ေလသာလမ်း၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ မင်းတုန်းမြို့။မင်းတုန်းမြို့မကွေးတိုင်း
28အော်တိုအိတ်ချိန်းခံတပ်ကြီးလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မင်းလှမြို့။မင်းလှမြို့မကွေးတိုင်း
29အော်တိုအိတ်ချိန်းဗုဒ္ဓကုန်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။ပခုက္ကူမြို့မကွေးတိုင်း
32အော်တိုအိတ်ချိန်းပြန်ဆက်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်၊ မြိုင်မြို့။မြိုင်မြို့မကွေးတိုင်း
33အော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရပ်၊ ပေါက်မြို့။ပေါက်မြို့မကွေးတိုင်း
34အော်တိုအိတ်ချိန်းမြို၀င်လမ်း၊ အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ ရေစကြိုမြို့။ရေစကြိုမြို့မကွေးတိုင်း
35အော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် သစ္စာလမ်းထောင့်၊ အနောက်ပိုင်းရပ်၊ဆိပ်ဖြူမြို့ဆိပ်ဖြူမြို့မကွေးတိုင်း
36အော်တိုအိတ်ချိန်းမြစ်ရှောင်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်၊ ဂန့်ဂေါမြို့။ဂန့်ဂေါမြို့မကွေးတိုင်း
38အိတ်ချိန်းလမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ထီးလင်းမြို့။ထီးလင်းမြို့မကွေးတိုင်း
42မင်းထီးလမ်းနှင့် မဟာပညာကျော်လမ်းထောင့်၊ မြောက်မြို့မရပ်ကွက်မောင်တောရခိုင်ပြည်နယ်
46ငပလီ-ဂျိတ္တောလမ်းမကြီး၊ မြပြင်ရပ်ကွက်၊ ငပလီမြို့ရွှေဝါချိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်
အားကစားကွင်း တောင်ဘက် ၊ ကြေးနန်းရုံးလမ်း ၊ ရုံးကြီးရပ်၊၊မုံရွာမြို့မုံရွာစစ်ကိုင်းတိုင်း
89ပင်လောင်း အော်တိုအိတ်ချိန်းအောင်ပန်း-လွိုင်ကော် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး ရုံးဝင်းရပ်ကွက်၊ ပင်လောင်းပင်လောင်းရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
90အောင်ပန်း အော်တိုအိတ်ချိန်းတော်ဝင်လမ်း၊ မိုးကောင်းရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းအောင်ပန်းရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
91ပင်းတယ အော်တိုအိတ်ချိန်းရွှေဥမင်ဘုရားလမ်း၊ ဆင်ခေါင်းရပ်ကွက်၊ ပင်းတယပင်းတယရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
92ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမဘေး၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးတောင်ကြီးရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
93မိုးနဲလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၅) နမ့်စန်နမ့်စန်ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
94ပုသိမ် စီးပွားရေးဌာနစိတ်မဟာန္ဓုလလမ်း၊ တိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်းပုသိမ်ဧရာဝတီတိုင်း
95ဟင်္သာတ အိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟင်္သာတမြို့ဟင်္သာတဧရာဝတီတိုင်း
97ဖျာပုံ အိတ်ချိန်းမာလာမြို့င်လမ်းဖျာပုံ ဧရာဝတီတိုင်း
98မအူပင် အိတ်ချိန်းစိမ်းမြကန်သာ ဘုရားလမ်းမအူပင် ဧရာဝတီတိုင်း
99လပွတ္တာ အိတ်ချိန်းအောင်သပြေလမ်းလပွတ္တာ ဧရာဝတီတိုင်း
100မြန်အောင် အိတ်ချိန်းစာတိုက်တဲကြီးကုန်းလမ်းမြန်အောင် ဧရာဝတီတိုင်း
103ရေကြည် အိတ်ချိန်းအောင်ဆန်း (၃) လမ်းရေကြည်ဧရာဝတီတိုင်း
104ပျဉ်းမနား အိတ်ချိန်းလယ်ဝေး လမ်းဟောင်း ရန်အောင်-၂ ၊ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်
105တိုင်းဒေသကြီးမန်နေဂျာရုံးဇဝနဒီပ ရပ်ကွက်၊ ငုရွှေဝါလမ်း ပ္ပုဗသီရီ။နေပြည်တော်
106လယ်ဝေး အိတ်ချိန်း(၄)ရပ်ကွက် ၊လယ်ဝေး အိတ်ချိန်းနေပြည်တော်
107Mandaly Regional Office၂၅လမ်း၊ ၈၀x၈၁ လမ်းကြား၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့မန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်း
108Meikhtila Auto Exchangeရန်မန်းလမ်း၊ရွှေမြင်တင်ဘုရားအနီး၊ရတနာမာန်အောင်ရပ်ကွက်၊မိတ္ထှီလာမြို့မိတ္ထီလာမြို့မန္တလေးတိုင်း
109Nuaung U Auto Exchangeအမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊အနော်ရထာလမ်း၊ သီရိပစ္စယာတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ညောင်ဦးမြို့ညောင်ဦးမြို့မန္တလေးတိုင်း
110Mogoke Auto Exchangeဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်၊မိုးကုတ်မြို့မိုးကုတ်မြို့မန္တလေးတိုင်း
116ဒလအော်တိုအိတ်ချိန်းဒလ - တွံတေးကားလမ်းဘေး၊ဗိုလ်ရန်မြေရပ်ကွက်၊ဒလမြို့။ဒလမြို့ရန်ကုန်တိုင်း
120ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုအော်တိုအိတ်ချိန်းရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်း၊ ခနောင်တိုအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့။ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့ရန်ကုန်တိုင်း
131ထားဝယ် အိတ်ချိန်းအလယ်လမ်း၊ ကညုံရပ်၊ ထားဝယ်မြို့ထားဝယ်တနင်္သာရီတိုင်း
132သရက်ချောင်း အိတ်ချိန်း တပ်နယ်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ သရက်ချောင်းမြို့သရက်ချောင်း တနင်္သာရီတိုင်း
133လောင်းလုံး အိတ်ချိန်း အောင်သပြေကျောင်းလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ လောင်းလုံးမြို့ လောင်းလုံး တနင်္သာရီတိုင်း
134ရေဖြူ အိတ်ချိန်း နတ်စင်လမ်း၊ စုပေါင်းရုံးအနီး၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ရေဖြူမြို့ရေဖြူ တနင်္သာရီတိုင်း
135မြိတ်အိတ်ချိန်းအေးရိပ်ချောင်လမ်း၊ ကလွင်ရပ်၊ မြိတ်မြို့မြိတ်တနင်္သာရီတိုင်း
136ကော့သောင်းအိတ်ချိန်းစုပေါင်းရုံးလမ်း၊ ပိတောက်ရွှေဝါရပ်၊ ကော့သောင်းမြို့ကော့သောင်းတနင်္သာရီတိုင်း
137ပုလောအိတ်ချိန်းအားကာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုလောမြို့ပုလောတနင်္သာရီတိုင်း
138ကျွန်းစု အိတ်ချိန်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းစုမြို့ကျွန်းစု တနင်္သာရီတိုင်း
139ပလ အိတ်ချိန်း အောင်ရတနာလမ်း၊ ပလရွာပလ တနင်္သာရီတိုင်း
140ပလောက် အိတ်ချိန်း ဗဟိုလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ပလောက်မြို့ပလောက် တနင်္သာရီတိုင်း
141တနင်္သာရီ အိတ်ချိန်း ဗလလမ်း၊ ချောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ တနင်္သာရီမြို့တနင်္သာရီ တနင်္သာရီတိုင်း
142ဘုတ်ပြင်း အိတ်ချိန်း ရတနာလမ်းသွယ်(၃)၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့ဘုတ်ပြင်းတနင်္သာရီတိုင်း
143BTS စခန်းမြသီတာလမ်း၊ မြသီတာရပ်၊ ကံပေါက်မြို့ကံပေါက်တနင်္သာရီတိုင်း
144ဖိုင်ဘာစခန်းအမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ ကလိန်အောင်မြို့ကလိန်အောင်တနင်္သာရီတိုင်း
146MPT Own Shop(၁) ရပ်ကွက်,ဘုရားလမ်းရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
147Auto ExchangeQr(1), Loikhuntaung ကျောက်မဲရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
148Auto ExchangeMandalay-Muse Rd,နောင်ချိုရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
149Auto ExchangeMaipon St, Zatsu Qrသီပေါရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
150Auto ExchangePinlon St, Qr(3)Theinniရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
151Auto Exchangetone kyat Qr, golf st,Kunlonရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
152Auto ExchangeBogyoke St, Qr(4)Tantyanရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
153Auto ExchangeAnawyata st, Kaung Own QrHopanရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
154Auto ExchangeBogyoke St, South QrMomeikရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
155Auto ExchangePyitaungsu Rd, Qr(2)Kutkaiရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
156MPT Own ShopPyitaungsu Rd, Homon QrMuseရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
157Auto ExchangePyitaungsu Rd, Qr(2)Maiyaeရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
159Auto ExchangeLamadaw St, North QrNanlanရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
160Auto ExchangeMantin St, Qr(6)Tarmoeyaeရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
161Auto ExchangeSabain St, Qr(4)Namatuရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
162Auto ExchangeMyoma QrMantonရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
163Auto ExchangeWaisar St, Qr(4)Namkhamရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
164Auto ExchangeKyaung St, Qr(2)Namphatkarရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
165Auto ExchangeKaungkhar Myo Thit Kaungkharရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
183ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ လွိုင်ကော်မြို့မိုက္ကရိုဝေဗ့်ရုံးဝင်း၊ ဒေါဉခူရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့လွိုင်ကော်မြို့ကယားပြည်နယ်
184လွိုင်ကော်အော်တိုအိတ်ချိန်းဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါဉခူရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့လွိုင်ကော်မြို့ကယားပြည်နယ်
185ရှားတော အိတ်ချိန်းအောင်ချမ်းသာရပ်၊ ရှားတောမြို့ရှားတောမြို့ကယားပြည်နယ်
186ဒီးမော့ဆို အော်တိုအိတ်ချိန်းလွိုင်ကော် -တောင်ငူလမ်း၊ ရွှေယောက်ရပ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့ဒီးမော့ဆိုမြို့ကယားပြည်နယ်
187ဖရူဆို အော်တိုအိတ်ချိန်း လွိုင်ကော်-ဟိုယာလမ်း၊ ထီးတရဲရပ်၊ ဖရူဆိုမြို့ဖရူဆိုမြို့ကယားပြည်နယ်
188ဘောလခဲ အော်တိုအိတ်ချိန်းရှမ်းပိုင်းရပ်၊ ဇနက္ကလမ်း၊ ဘောလခဲမြို့ဘောလခဲမြို့ကယားပြည်နယ်
189ရွာသစ်ဆက်သွယ်ရေးစခန်းဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ တောင်ပိုင်းရပ်၊ ရွာသစ်မြို့ရွာသစ်မြို့ကယားပြည်နယ်
190ဖားဆောင်းအော်တိုအိတ်ချိန်းသံလွင်ဦးလမ်း၊ မြောက်ပိုင်းရပ်၊ ဖားဆောင်းမြို့ဖားဆောင်းမြို့ကယားပြည်နယ်
192တိုင်းမန်နေဂျာရုံးယက္ကန်းလမ်း၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်၊ ပြည်ပြည်ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 193သဲကုန်းအော်တိုအိတ်ချိန်းအရှေ့မြို့ပါတ်လမ်း၊ ရပ်ကွက်-၁၊ သဲကုန်းမြို့သဲကုန်းမြို့ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 194ဥသျှစ်ပင်အော်တိုအိတ်ချိန်းလမ်းမတော််လမ်း၊ ရတနာပုံရပ်၊ ဥသျှစ်ပင်ဥသျှစ်ပင်ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 195ရွှေတောင်အော်တိုအိတ်ချိန်းကြာနီကန်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရပ်၊ ရွှေတောင်ရွှေတောင်ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 196ပေါင်းတည်အော်တိုအိတ်ချိန်းရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ စျေး-၁ ရပ်၊ ပေါင်းတည်ပေါင်းတည်ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 197နတ်တလင်းအော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊နတ်တလင်းနတ်တလင်းပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 198ဇီးကုန်းအော်တိုအိတ်ချိန်းစာတိုက်လမ်း၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းဇီးကုန်းပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 199ကြို့ပင်ကောက်အော်တိုအိတ်ချိန်းအရှေ့လမ်းမတော်လမ်း၊ စျေးချိုတောင်ရပ်စျေးချိုတောင်ရပ်ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 200အုတ်ဖိုအော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ရုံတန်းလမ်း၊ မိုးညိုတန်းရပ်ကွက်၊ အုတ်ဖိုမြို့အုတ်ဖိုမြို့ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 201မင်းလှအော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ရုံတန်းလမ်း၊ အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ မင်းလှမင်းလှပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 202လက်ပံတန်းအော်တိုအိတ်ချိန်း၂လမ်း၊ မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ လက်ပံတန်းလက်ပံတန်းပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 203သာယာဝတီအော်တိုအိတ်ချိန်းမိုက္ကရိုဝန်း၊ သာယာဝတီသာယာ၀တီပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) 204တိုင်းမန်နေဂျာရုံး၊ပဲခူးမြို့။ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းကြီး၊ နာရီစင်အနီး၊ ပဲခူးမြို့ပဲခူးမြို့ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့ပိုင်း) 205တောင်ငူအော်တို အိတ်ချိန်း(၁၉)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ တောင်ငူမြို့တောင်ငူမြို့ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့ပိုင်း) 206ကျောက်တံခါး အော်တိုအိတ်ချိန်းစာတိုက်ရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့ကျောက်တံခါးမြို့ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့ပိုင်း) 207ဒိုက်ဦးအော်တို အိတ်ချိန်းဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊ ဒရယ်မီးလမ်း၊ ဒိုက်ဦး မြို့ဒိုက်ဦး မြို့ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့ပိုင်း) 208ဖြူးအော်တို အိတ်ချိန်းတာြခားရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း ဖြူးမြို့ ဖြူးမြို့ ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့ပိုင်း) 209ဆွာ မိုက္ကရိုဝေဗ့်ပိတောက်မြိုင်ရပ်ကွက်၊ ဆွာမြို့ဆွာမြို့ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့ပိုင်း) 210ပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံးသုဓနုလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့ဘားအံမြို့ကရင်ပြည်နယ်
211မြဝတီအော်တိုအိတ်ချိန်းနတ်သျှင်နောင်လမ်း ၊ မြဝတီမြို့မြဝတီမြို့ကရင်ပြည်နယ်
215သံတောင်ကြီးအော်တိုအိတ်ချိန်းဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းလမ်း(၄)ရက်ကွက် သံတောင်ကြီးသံတောင်ကြီးကရင်ပြည်နယ်
1. What is daily unlimited voice package of MPT?
Only 399Kyats worth daily unlimited voice package makes MPT users to enjoy unlimited on-net call (MPT to MPT) till 23:59:59 of subscription date.
2. Who are eligible for daily unlimited voice package?
MPT GSM/WCDMA SWE Thahar & Base Tariff user can enjoy daily unlimited voice package.
3. When will the daily unlimited voice package be available?
MPT GSM/WCDMA SWE Thahar & Base Tariff users can buy daily unlimited voice package from 1st November, 2016 to 31st January, 2017This rate is subject to an additional 5% commercial tax starting April 1, 2016.
4. How can I subscribe to daily unlimited voice package?
Dial *399# or Send VP1 to 1332 to subscribe to daily unlimited voice package. Each package will be expired on 23:59:59 of subscription date. 5. I buy daily unlimited voice package but it was charged 419Ks. Why?
This rate is subject to an additional 5% commercial tax starting April 1, 2016.